६ महीनामा एक अर्ब ३६ करोड बराबरको तरकारी तथा फलफूलमा कारोबार – Sky News Nepal
६ महीनामा एक अर्ब ३६ करोड बराबरको तरकारी तथा फलफूलमा कारोबार
२७ माघ २०७७, मंगलवार १४:४४ मा प्रकाशित
माघ २७, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतले चालू आव २०७७/७८ को ६ महीनामा तरकारी तथा फलफूलमा रू. एक अर्ब ३६ करोडको कारोबार गरेको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले संकलन गरेको अर्थ बजारको तथ्यांकलाई हेर्दा ६ महीनामा रू. एक अर्ब ३६ करोड ७९ लाख दुई हजार ६०० कारोबार भएको पाइएको हो ।
मुलतः वर्षे तथा हिउँदे तरकारी, बेसार, अलैँची, तरकारी बीउ, वर्षे मकै, बदाम, कन्येच्याउ, लिची, आँप, सुन्तला, वर्षे तथा हिउँदे आलु, जुनार (मौसम), अदुवा र लसुनमा भएको कारोबारलाई पहिलोपटक तथ्यांकमा निकालिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।
‘हामीले सुर्खेत जिल्लामा पहिलोपटक लिएको फलफूल र तरकारी बालीवस्तुको आर्थिक कारोबार हो’, निर्देशक रोकायले भने, ‘उत्पादित बालीवस्तुबाट भएको आन्तरिक तथा बाह्य कारोबार कति भएको छ भन्ने कुरा यो प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।’ उनले भने, ‘सुर्खेत राजधानी भएर कर्णालीका अन्य जिल्लाबाट आएको तरकारी तथा फलफूलको कुरा हुनसक्छ, निर्यात कारोबार तेब्बरले भएको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार सुर्खेत जिल्लाभित्र भएको ५३ हजार ५५३ क्विन्टलबाट रू. २३ करोड १४ लाख २३ हजार ४०० कारोबार भएको छ भने सुर्खेतबाट बाहिर निर्यात दुई लाख २५ हजार ५८९ क्विन्टलमा रू. ८० करोड ५३ लाख ६९ हजार २०० कारोवार भएको छ । यो प्रारम्भिक तथ्यांक भएकाले यसको प्रशोधन गरिने निर्देशक रोकायको भनाइ छ ।
निर्देशनालयका अर्थविज्ञ प्रिया थापाले यहाँ उत्पादित कन्येच्याउ दुई हजार ७२५ क्विन्टलबाट रू. छ करोड २६ लाख ७५ हजार, हिउँदे तरकारी २० हजार ५६७ क्विन्टलबाट रू. छ करोड १७ लाख एक हजार र वर्षे तरकारी १८ हजार ४८८ क्विन्टलबाट रू. पाँच करोड ९१ लाख ६१ हजार ६०० आन्तरिक कारोबार भएको बताए ।
‘कारोवार भएका तरकारी तथा फलफूल बालीमा आयातभन्दा कर्णालीले उत्पादन गरेका फलफूल र तरकारी बालीवस्तु नै छन्’, अर्थविज्ञ थापाले भने, ‘उत्पादित बालीवस्तुबाट भएको कारोवारमा कर्णालीले कति निर्यात र आयात गर्दोरहेछ भन्ने कुराको निक्र्योल गरिनेछ ।’ पहिलोपटक लिएका तथ्यांकको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए ।
त्यसैगरी निर्यातित वर्षे तरकारी एक लाख ६६ हजार ४६१ क्विन्टलबाट रू. ५३ करोड २६ लाख ७५ हजार २००, हिउँदे आलु २७ हजार ६७५ क्विन्टलबाट रू. १२ करोड ७३ लाख पाँच हजार, हिउँदे तरकारी १७ हजार ५४८ क्विन्टलबाट रू. पाँच करोड २६ लाख ४४ हजार र सुन्तला पाँच हजार ८५६ क्विन्टलबाट रू. तीन करोड ८० लाख ६४ हजार बाह्य कारोबार भएको अर्थविज्ञ थापाले बताए । रासस